चीन होभर १ इलेक्ट्रिक स्कुटर निर्माता र आपूर्तिकर्ता | हाइबा
यसले 250W वा 0.30 bhp विद्युतीय मोटर पाउनेछ। यो पूर्ण लागतमा 70 किलोमिटरसम्म जान सक्छ र 250W, 0.30 Bhp इन्जिनद्वारा संचालित छ। यो 250W वा 0.30 इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित छ जसले चालीस आठ V 20 Ah ब्याट्री प्रयोग गर्दछ। यस भिडियोमा, हामी तपाईंलाई मिल्दो कन्ट्रोलरसँग ATO 400W-15kW 24V/48V/72V/96V अत्यधिक टर्क ब्रशलेस DC मोटर संलग्न गर्ने तरिका देखाउनेछौं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल वस्तुको लागि साइन वेभ नियन्त्रक। यो तीन पाङ्ग्रा सिटीकोको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकल एडल्ट लगायत EU भन्सार कुनै कर छैन 60V 20ah हटाउन सकिने लिथियम ब्याट्री व्यापारसँग सम्बन्धित थप विवरणहरूको लागि माथिको अधिग्रहण Now बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
आधा समयमा इलेक्ट्रिक स्कूटरमा तपाईंको परिणामहरू तीन गुणा
यसले 250W वा 0.30 bhp विद्युतीय मोटर पाउनेछ। यो पूर्ण लागतमा 70 किलोमिटरसम्म जान सक्छ र 250W, 0.30 Bhp इन्जिनद्वारा संचालित छ। यो 250W वा 0.30 इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित छ जसले चालीस आठ V 20 Ah ब्याट्री प्रयोग गर्दछ। यस भिडियोमा, हामी तपाईंलाई मिल्दो कन्ट्रोलरसँग ATO 400W-15kW 24V/48V/72V/96V अत्यधिक टर्क ब्रशलेस DC मोटर संलग्न गर्ने तरिका देखाउनेछौं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल वस्तुको लागि साइन वेभ नियन्त्रक। यो तीन पाङ्ग्रा सिटीकोको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकल एडल्ट लगायत EU भन्सार कुनै कर छैन 60V 20ah हटाउन सकिने लिथियम ब्याट्री व्यापारसँग सम्बन्धित थप विवरणहरूको लागि माथिको अधिग्रहण Now बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीले उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, 60 भन्दा बढी देशहरू र क्षेत्रहरूका सम्भावनाहरूसँग नियमित र लामो उद्यम सम्बन्धहरू स्थापना गरेका छौं। माथिको स्कूटर इलेक्ट्रीक सहित हाम्रो साइटमा सूचीबद्ध चीनबाट खेलकुद र मनोरञ्जनका वस्तुहरूको ठूलो संख्या छ, र तपाईंले आफ्नो क्लोजिङ सोर्सिङ चयन गर्नु अघि इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्कूटर, मोटर स्कूटर जस्तो देखिने अन्य खरिद विकल्पहरूबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। उपयुक्त स्कूटर फेला पार्नुहोस्। विद्युतीय उत्पादन इकाई र निर्माताहरूले तपाईंको भविष्यको उद्यम सफलताको लागि ठूलो भिन्नता बनाउन सक्छन्। यदि तपाइँ जे भए पनि तपाइँको लागि कुन प्रकारको स्कुटर सही छ भन्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न भने, हाम्रो नयाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद गाइडमा उत्तम स्कूटर चयन गर्ने बारे थप सिकाउनुहोस् वा तल सस्तो स्कूटरहरू पछाडिको डेटामा गहिरो खन्नुहोस्! एउटै ह्वील सामाग्री (जस्तै ग्लियोन डली) खेल्ने बिभिन्न इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूको तुलनामा, मोडेल वनमा सवारीहरू एकदमै सहज छन्। मोटरसाइकलको प्रकार (जस्तै डर्ट बाइक, क्रूजर, स्पोर्ट बाइक, इत्यादि) निर्दिष्ट गर्नु राम्रो हुन्छ। विद्युतीय स्कूटर वा बाइकको धेरै शक्तिशाली पक्ष, अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि, लागतमा बढ्दो भिन्नता हो। Luna Apocalypse V3 स्कूटर एक पूर्ण लोडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर हो। लुनाको Apocalypse एक प्रवेश द्वार संग आउँछ। ब्रेकिङ ड्युटीहरू प्रवेशद्वारमा रहेको डिस्क र पछाडिको ड्रमद्वारा व्यवहार गरिन्छ। निलम्बन कर्तव्यहरू अगाडि भित्र टेलिस्कोपिक फोर्कहरू द्वारा पूरा हुन्छन्। अन्तमा, प्रवेशद्वार र पछाडिको निलम्बनले सवारीको स्थिरता र सान्त्वनामा उल्लेखनीय सुधार गर्दछ। ट्रेकको प्रवेशद्वार र पछाडिको IsoSpeed ​​decouplers ले यो बाइकलाई सवारीमा विशेष रूपमा उत्कृष्ट बनाउँछ, जसले फ्रेमको कम्प्लायन्समा सुधार गर्छ र लचिलो बडी भएको हेभी ई-बाइकको तुलनामा राइडरलाई उल्लेखनीय सान्त्वना प्रदान गर्दछ। धेरै बाइकहरूले अब दोस्रो ब्याट्रीलाई पिग्गीब्याक गर्ने विकल्प पनि प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई आफ्नो दायरा दोब्बर गर्न अनुमति दिन्छ, वा, इलेक्ट्रिक बाइक कम्पनी मोडेल X को मामलामा, तीन (एक पछाडिको र्याकमा र दुई अगाडि टोकरीमा, जति धेरैको लागि। 200-माइल दायराको रूपमा)।
दुबै अब वूम वेबसाइटबाट अर्डर गर्न उपलब्ध छन्। 4. क्यामेरा स्थितिहरू जाँच गर्नुहोस्: नजिक-देखि-जमीन स्तरहरू, आँखा-स्तर, प्रवेश-समाप्त, र पक्ष-अन्तहरू, र अन्य कुराहरू पढ्न योग्यताका साथ क्याप्चर गर्न महत्त्वपूर्ण छन्। यदि तपाईं दोब्बर क्षमताको खोजीमा ठूलो डग हुनुहुन्छ भने, रामियरको शीर्ष5जुम्ल्याहा मोटर स्कुटरहरू हेर्नुहोस्। लुना लाइनअप इलेक्ट्रिक स्कुटरदेखि तीव्र एन्ड्युरो ई-बाइक र बीचमा सम्पूर्ण धेरैको दायरा हो। छोटो यात्रा ई-बाइकले चाँडै गति लिन्छ जबकि लामो यात्रा कुनै नराम्रो अवतरणका लागि उत्तम हुन्छ। तपाईंले विश्वास गर्न नसकिने ब्याट्री जीवनको अर्थ लामो समयसम्म चार्ज गर्नुको अर्थ हो, तर यो स्कुटर पूर्ण रूपमा चार्ज हुन दुई घण्टा मात्र लाग्छ। तर, यदि अफ-रोडिङ तपाईंको कारक हो भने, यो एक ठोस (वा केही हदसम्म, असभ्य) शर्त हो। यो स्व-घोषित हिल-क्रसरले 72V 70aH ब्याट्री र हुड मुनि दुई 7500W मोटर घमण्ड गर्दछ, त्यसैले भन्नुपर्दा, यसलाई जस्तै बनाउँदै। 20 डिग्री सम्मको पहाडी इलाकामा यात्रा गर्न उत्कृष्ट रूपमा सहज छ किनकि यो चापलुसी वरपरको अनुभव हो। छनौट गर्न को लागी धेरै संग, तपाई को लागी सही पत्ता लगाउने निर्माण भित्र एक महिना लामो माइग्रेन जस्तै देखिन्छ। कसै-कसैको अगाडि ठूला पाङ्ग्राको साथ प्रत्येक मध्ये एउटा पनि हुन्छ। स्कुटरको तौल ५९ किलो छ, ब्याट्री सहित, र व्यक्तिगत ग्याजेटहरू बोक्नको लागि अगाडि टोकरी छ। १,२९,९९९। तपाईंले केही राज्यहरूमा सब्सिडीहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ जसले स्कूटरको प्रभावकारी मूल्य कटौती गर्दछ। स्टिल्थको पूर्ण मूल्य $१,७५० हो र यो स्टिल्थी म्याट ब्ल्याकमा उपलब्ध छ। क्यालिफोर्निया-मुख्य रूपमा आधारित फर्मसँग यसको लाइनअपमा कुल 8 इलेक्ट्रिक दुई-पाङ्ग्रे सिर्जनाहरू छन्। शहरहरूमा आपूर्ति गरिएको प्लेसमेन्ट डेटा नाम, इमेल वा अन्य सीधा पहिचान योग्य जानकारीसँग लिङ्क गरिने छैन, यद्यपि "यदि तपाइँ पर्याप्त GPS ज्ञान बिन्दुहरू लिनुभयो र अन्य डेटा एकाइहरू संलग्न गर्न थाल्नुभयो भने, यो विशिष्ट व्यक्तिहरू स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ," रेजिना क्लुलोले उल्लेख गरे। Populus को CEO, एक कम्पनी जसले शहरहरूलाई गोपनीयताको रक्षा गर्दा कभरेज र योजनाको लागि सुरक्षित रूपमा ज्ञान प्रविष्टि गर्न मद्दत गर्दछ। 99,999 जबकि S1 पेशेवर लागत रु। तिनीहरूको गणनामा समावेश गरिएका घटकहरू मध्ये "अकाल मृत्युको कारणले आयको हानिको अनुमान र एम्बुलेन्स, प्रहरी, अस्पताल, समयपूर्व अन्त्येष्टि, राज्य र कार्य सुरक्षा प्राधिकरण अनुसन्धान, र मृत्यु क्षतिपूर्ति लागतहरूको लागि मुख्यतया कोरोनियल जानकारीमा आधारित प्रत्यक्ष लागतहरू थिए। लागत 2010 डलरमा गणना गरिएको थियो," कागजले भने। स्कुटरलाई प्रत्येक दुई वर्षमा ब्याट्री वैकल्पिक चाहिने हिरोले बताएको छ । त्यसोभए ३-चार वर्षपछि हामीले ब्याट्री १० देखि २० प्रतिशतसम्म घटेको देख्नेछौं र यसले फरक फरक भएमा ६५ किलोमिटर घटाउने अनुमान छ। प्रत्येक स्कुटरको सवारी दायरा प्रभावकारी रूपमा फरक छ। यसमा प्रति ग्रीनब्याक भिन्नता र प्रति पाउण्ड भिन्नताका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन स्कोरहरू थिए, यद्यपि सवारी उच्च गुणस्तर र उच्च गुणस्तरको निर्माण विपरित स्कूटरहरू जत्तिकै समान चरणमा थिएन। 250 किमी सवारी दायरा भेरियन्ट। स्कूटरको DX EM भेरियन्टले भारतमा उपलब्ध सबै इलेक्ट्रिक स्कूटरहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो दायरा प्रदान गर्दछ। ब्याट्रीलाई पूर्ण रूपमा चार्ज गर्न 4-6 घण्टा लाग्छ, र स्कूटरले 25 किमी/घन्टाको उच्च गति प्राप्त गर्न सक्छ।
ओकिनावा रिजले 24 Ah 60V ब्याट्री पाउँछ जुन पूर्ण रूपमा चार्ज हुन 4-6 घण्टा लाग्छ। स्कुटरमा ७२ V, २४ Ah ब्याट्री रहेको छ जसको पूर्ण खर्च हुन करिब ८-९ घण्टा लाग्छ। मोटर एन्टी थेफ्ट लकले बाहिर पार्किङ गर्दा स्कूटर सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। एन्टी-थेफ्ट मोटर लक भएको MNL5 इलेक्ट्रिक स्कूटर MNL2 60V20AH ब्याट्री भएको स्पोर्टी फेसनहरू मध्ये एक हो र यसलाई 48V मा स्विच गर्न सकिन्छ। त्यहाँ3मुख्य बिक्री कारकहरू छन्। स्कूटरले ३३ Ah 48V ब्याट्रीद्वारा पावर प्राप्त गर्नेछ जसले अधिकतम 250W वा 0.33 Bhp उत्पादन गर्छ। दुबै भिन्नताहरू एउटै 48V 20 Ah ब्याट्रीद्वारा संचालित छन् जुन पूर्ण रूपमा चार्ज हुन 7-8 घण्टासम्म लाग्छ। यहाँ फेला परेको स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटरले फरक दायराहरू समावेश गर्दछ र चार्ज गर्न3देखि4घण्टा लाग्छ। स्कुटरमा १५०० वाट वा २ बीएचपीको विद्युतीय मोटर रहेको छ जसले यसलाई ४५ किमी/घन्टासम्म लिन सक्छ। बाइकले वास्तवमै शान्त, मध्य-माउन्ट गरिएको, तल्लो कोष्ठमा राखिएको 500-वाट मोटरको प्रयोग गर्दछ। यसको वास्तविक विश्व दक्षताले तपाइँको यात्रा कसरी र कहाँ निर्भर गर्दछ, यद्यपि Segway-Ninebot ES4 इलेक्ट्रिक किकस्कूटरमा 28 माइलको उद्धृत भिन्नता र 18.6mph को उच्च गति छ, जसले यसलाई यो मान कोष्ठकमा सबैभन्दा छिटो स्कूटरहरू मध्ये एक बनाउँछ।
S1 ले 121 किलोमिटरको दावी दायरा प्रदान गर्दछ जबकि S1 प्रोले 181 किलोमिटरको दाबी दायरा पठाउन सक्छ। हाल, त्यहाँ बिक्रीमा केवल दुईवटा पूर्ण-विद्युतीय कारहरू छन्, तर त्यहाँ धेरै अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बाइकहरू छन् जुन तपाईंले किन्नु पर्छ। युरोपमा सुरुमा तीन मध्ये दुईवटा स्कुटर (MQi GT Evo र NQI GTS) र इलेक्ट्रिक स्कुटर मार्च १ बाट लन्च हुने सम्भावना छ। पूर्ण चार्जमा, Optima Plus स्कुटरले ७० किलोमिटरसम्म पुग्न सक्छ। पूर्ण 250 किलोमिटर भिन्नता प्राप्त गर्न तपाईंले उच्च भेरियन्टहरू जत्तिकै कदम चाल्नु पर्छ। स्कुटरमा ७०-८० किलोमिटरको राइडिङ भिन्न छ। स्कूटरमा तपाईलाई आवश्यक पर्ने केहि छैन जुन तपाईले एकदम राम्रो स्प्रिन्ट सेटअपबाट ट्याकोमिटर समावेश गर्ने गेजहरूको अत्यधिक-शैली प्यालेटमा Typhoon 50 खोज्न सम्भव छैन। ग्यासबाट सञ्चालित सुपरबाइकको विकल्प बन्ने प्रयास गर्नुको सट्टा इलेक्ट्रिक ड्राइभट्रेनका केही उत्कृष्ट फाइदाहरूलाई वास्तवमा पूंजीकृत गर्ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलको स्वामित्व लिनु पर्छ? ब्याट्री प्रतिस्थापन समय। हिरोको दाबी छ कि ब्याट्रीलाई २ वर्षमा प्रतिस्थापन चाहिन्छ र यसको लागत रु. नतिजा स्वरूप, हामीसँग विश्वको कुनै पनि विद्युतीय मोटरसाइकलको दक्षता र परिष्कारको लागि अति उत्तम सम्भावित स्तरमा थप ४ वर्षको गहन प्राविधिक विकास हुनेछ। जबकि एनएमसी केमिस्ट्री र मोटरमा चल्ने ब्याट्रीमा तीन वर्ष वा २०,००० किलोमिटरको ग्यारेन्टी हुन्छ जुन लगभग ६००-७०० चार्ज साइकल हो। यसले 250W मोटरलाई पावर गर्ने 48 V, 20 Ah ब्याट्री प्राप्त गर्नेछ। ब्याट्री 10Amp चार्जर संग पूर्ण चार्ज हुन 2-3 घण्टा लाग्छ।
अघिल्लो: इलेक्ट्रिक स्कूटर 100 माइल दायरा
अर्को: आइकन q इलेक्ट्रिक स्कुटर
इलेक्ट्रिक अफ रोड स्कूटर
व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक स्कूटर
इलेक्ट्रिक स्कुटर बिक्रीमा सस्तो इलेक्ट्रिक सिटिन...
फुटपाथमा इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू कानूनी
इलेक्ट्रिक स्कुटर बिक्रीमा सस्तो सबैभन्दा शक्तिशाली ई...
बिजुली स्कुटर बिक्री को लागी सस्तो पल्स प्रदर्शनकर्ता ...